विप्लवका मामलामा सरकार संवेदनशील भएनः काँग्रेस नेता लेखक
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो पार्टी वार्ता तथा संवादको पक्षधर भएकोले विप्लवसँग वार्ता र संवादमार्फत सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोटर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता लेखकले कांग्रेसकै पहलकदमीका कारण माओवादीसँगको वार्ता सफल भएको र मुलुक अहिलेको अवस्थामा रुपान्तरण भएको बताए । नेता लेखकले भने, ‘हाम्रो पार्टी हरहमेशा वार्ता तथा सम्वादको पक्षमा छ । हामी कहिल्यै पनि हत्या, हिंसाको पक्षधर होइनौं । त्यसैले विप्लवसँग पनि सरकारले वार्ता तथा सम्वाद गरोस् ।’
उनले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका पूर्व संयोजक तथा नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको कुरा सुन्दा सरकारले अहिलेसम्म वार्ताका लागि विप्लवलाई पत्राचार नै नगरेको सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म पत्राचार गरेको छैन भन्ने कुरा पाण्डेजीले भन्नुभयो, अहिलेसम्म मागका बारेमा पनि ठोस कुरा आएको छैन भन्नुभयो । सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
वर्तमान सरकारसँग जनता निराश रहेको गुनासो पनि नेता लेखकले गरे । उनले भने, ‘यो सरकार कता जाँदैछ ? सरकारमा रहेका दलका नेताहरु नै अहिले सर्वथा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’ उनले सरकारले देश र जनतामा निराशाको विउ छर्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
संसदमा प्रस्तुत गरिएका विद्येयकहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको पनि उनले सुनाए । भने, ‘त्यतिमात्रै होइन, सरकारका निर्णयहरु पनि विवादित बनेका छन् ।’ गुठी, मिडिया काउन्सिल, वन विद्येयकलगायतका सबै विद्येयक विवादस्पद बनेकोमा उनले गुनासो पोखे ।
लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नामै नलिई जनतालाई गलत सूचना दिएको सुनाए । उनले भने, ‘सरकारमा बसेका सबैभन्दा ठूला मान्छेले जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नुभयो ।’
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्री तथा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट मैले धेरै पटक विप्लव समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक वार्ता तथा छलफल गरेको छु । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता भएको छैन् ।’
उनले भने,‘यो राजनीतिक समस्या भएकोले यसलाई राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा छ । अहिले नेकपा र डबल नेकपाबीच एक आपसमा सौताकोजस्तो व्यवहार देखिएको छ । यो व्यवहार त्यागेर छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सरकार र विप्लव समूहबीच ठोस वार्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘विप्लवसँग वार्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले आजभन्दा करिब २ महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थियौं ।’